6 लागि परिणाम ben10 2016
डिएगो रेल उद्धार
डिएगो उहाँले आफ्नो घर फिर्ता उद्धार गर्नुपर्छ पशुहरू लिन चाहन्छ। मदत गर्न आउनुहोस्!
मेरो नयाँ कोठा 3
सबै आफ्नो नयाँ कोठा लागि उपलब्ध वस्तुहरू ब्राउज गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई आफ्नो ठाउँ को लागि, त्यसपछि पूर्ण आफ्नो ठाउँ फिट गर्न आदेश तिनीहरूलाई अनुकूलन गर्न सूची मा आइटम क्लिक गर्नुहोस्। दैनिक सजावट जाँच विशेष वस्तुहरू अनलक गर्न तिनीहरूलाई challenges¡ªplay!
बेन 10 विदेशी बलमा
बेन 10 जहाँ एउटा दुष्ट मिसिन आजभोलि यस्तै भैरहेको प्राणीहरू अन्डा बनाउन प्रयोग गरिन्छ एक Crypt फेला छ। तिनीहरूलाई threes वा एउटै प्राणी बढी सँगै भेला भएर तिनीहरूलाई छुटकारा प्राप्त गर्न उहाँलाई मद्दत गर्नुहोस्। बाहिर हेर! अण्डा भन्दा जाने भने तपाईं समय को एक सीमित राशि छ र
लस भेगास हथौडा
तपाईंको ग्याँस मन र तपाईं दिइएको समय भित्र ट्रयाक पूरा गर्न प्रयास रूपमा माथि थप रोज्नुहोस्।
क्रोधित चरा खराब सुँगुरहरु
तपाईं playfield मा सबै सुँगुरहरु नष्ट उद्देश्य संग, मा तैनात सुँगुरहरु वा विभिन्न संरचना भित्र चरा सुरु गर्न एक slingshot प्रयोग गर्नुहोस्। सबै खराब सुँगुरहरु मार्न